Nagu saabsan - Huiyuweiye (Beijing) Qalabka dareeraha ah ee Co., Ltd.
Huiyuweiye (Beijing) Qalabka dareeraha ah ee Co., Ltd.
Hyuweiy (Beijing) Qalabka dareeraha ah ee Co., Ltd waa shirkad laan ka ah Beijing Huiyuweiye International Engineering Engineering Co., Ltd. (http://www.bjhuiyuguoji.com/index.html)
Waa shirkad tiknoolajiyad sare leh oo soo saarta qalabka dareeraha, isku-darka cilmi baarista iyo horumarka, soo-saarka, iibinta iyo adeegga hal, oo leh koox farsamo oo xirfad leh, geedi socodka wax soo saarka heer sare ah, tayada wax soo saarka aad u fiican, adeeg deg deg ah oo wanaagsan, si ay u siiso dadka isticmaala tiro badan oo ah xalalka dareeraha. Waxaan la shaqeynaa jaamacado badan si aan u dhisno xiriir horumarineed oo muddo dheer ah. Wax soo saarkayagu si ballaaran ayaa loogu adeegsadaa shaybaarada cilmi baarista iyo wax soo saarka warshadaha iyo dhinacyada kale. Waxaan leenahay injineer farsamo yaqaan ah, injineer koronto, injineerada OEM, iyo iibinta xirfadleyda ah iyo ka dib iibinta adeegga adeegga, wuxuu sameeyay xirfadle, dhalinyaro, baacsiga kooxda ugu fiican.
Shirkadeenu waxay saldhig u tahay Jaamacadda Sayniska iyo Teknolojiyada Beijing, Harbin Institute of Technology, Hebei University of Technology, Hebei United University iyo jaamacado kale iyo koleejyo, iyadoo ku tiirsan faa'iidada xoogan ee hibada farsamada, waxay soo bandhigtay sayniska iyo tikniyoolajiyadda horumarsan ee wadamada shisheeye waxayna bilaabeen inay ka shaqee warshadaha qalabka dareeraha saxan. khadkeena waxsoosaarka wuxuu kakooban yahay bamka peristaltic, shaybaarka saliingaha shaybaarka, mashiinka saliingaha warshadaha, mashiinka wax lagu rido iyo mashiinka OEM sida ku cad shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha. Ilaa hadda waxaan haynaa in ka badan 40 taxane ah oo ah 360 nooc oo soo saar ah. Alaabooyinka waxaa tijaabiyey hay'ad xirfadlayaal ah, waxay gaareen heer caalami oo heer sare ah.
Sanadihii la soo dhaafay, hoggaanka shirkaddu wuxuu had iyo jeer u hoggaansamayaa fikradda "ganacsiga sayniska iyo tikniyoolajiyadda", sahaminta waddada horumarka kaladuwan iyo waarta.
Habka maaraynta horumarsan waa huwanaha horumarka Huiyu. Farsamada wanaagsan waa shiraaca Huiyu's horumarka, La kulanka barwaaqada sayniska iyo horumarka tikniyoolajiyadda, Huiyu waa inuu awood u yeeshaa inuu shiraaco. Geesi inuu noqdo kan ugu horreeya.